Ankizy mandany mihoatra ny 5000 euro amin'ny lalao iPad | Vaovao IPhone
Lohahevitra miverimberina izy io indraindray: fividianana fampiharana, indrindra amin'ny lalao. Rehefa mamaky lohateny toy ity amin'ity lahatsoratra ity ianao dia mieritreritra avy hatrany fa misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Zazalahy 7 taona any Angletera dia nandany 5.500 XNUMX € tsy voadinika tamin'ny fividianana lalao Jurassic World ho an'ny iPad tsy misy ilay raim-pianakaviana, mazava ho azy, nanamarika izany mandra-pahatongan'ny zero ny kaonty fanamarinany. Ny toe-javatra toy izao dia mampiakatra ny adihevitra momba ny fitadiavam-bola loatra ataon'ny ray aman-dreny amin'ny famelana ireo fitaovana ireo amin'ny zanatsika, na ny Apple (sy ny sisa amin'ireo orinasa) dia tokony hanao zavatra momba izany mba tsy ho mora ny mividy.
Marina fa apetrak'i Apple ho an'ny mpampiasa ny fitaovana ilaina mba tsy hitrangan'izany. Etsy ankilany, ilay zaza dia tsy maintsy nahalala ny teny miafin'ny kaontin-drainy mba hahafahany manao ireo fividianana ireo, satria ny vola toy izany dia tsy lany ao anatin'ny indray mipi-maso, fa afaka ora maromaro (andro maromaro) mividy tsy mijanona. Ho fanampin'izany, ny mpampiasa iOS dia afaka mametraka famerana ny rafitra mba tsy ho afa-miditra ao aminy ny fividianana tafiditra ary tsy misy afaka miditra amin'izy ireo raha tsy fantany ny lakile fanidiana vaovao. Fa marina ihany koa fa ny lalao dia naoty mendrika ho an'ny mpilalao 4 taona. Tokony havelan'i Apple ve ity karazana fividianana ity amin'ny lalao ho an'ny zaza tsy ampy taona? Tsy tokony hatsangana farafaharatsiny farafaharatsiny fomba iray tsy dia manelingelina sy manintona hampiroborobo an'ity karazana fiantsenana ity? Satria izay efa nilalao ity lalao ity dia ho tsapany fa ny sarotra dia tsy mividy.
Etsy ankilany, tsy azontsika hadinoina fa nomen'ity raim-pianakaviana ity ny kaody fiantsenana. Raha naka ny carte de crédit anao ianao hividy amin'ny fivarotana an-tserasera, takianay koa ve ireo fivarotana ireo hamerina ny vola? Fa kosa, hieritreritra izahay fa ny raim-pianakaviana ihany no meloka ary tsy maintsy handoa ny vokany. Mora kokoa ny manao fividianana amin'ny iPad noho ny amin'ny tranokala misy carte de crédit, nefa tsy tokony hohadinointsika mihitsy fa ny iPhone na ny iPad dia manana fampahalalana tena marefo izay mety hiteraka olana amin'ny tanana diso. Raha ny tokony ho izy, raha misy olona aorian'ny namakiany ity te hahalala ny fomba hamerana ity karazana fividianana ity, in Ity rohy ity manana ny lesona momba ny fanaovana azy ianao. Ny faran'ny tantara dia nanaiky ny handoa anao i Apple, na dia afaka folo andro eo ho eo aza. Tsy faly amin'ilay vahaolana ny raim-pianakaviana ary mimenomenona mihitsy aza fa tsy afaka mividy fanomezana ho an'ny zanany amin'ity Noely ity. Tsy mino raha tsy Mahita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ankizy mandany mihoatra ny 5000 euro amin'ny lalao iPad
PERIMATE dia hoy izy:
Io dia ampiasain'ny raim-pianakaviana tanteraka, amin'ny famelana zavatra tsy ho an'ny zaza ... inona no mety hitranga raha navelany basy izy? Misy ireo manimba ankizy amin'ny famelana azy ireo haitao avo lenta toa ny kilalao. (Tsy ilaina holazaina, finday) Makà kilalao!
Valiny amin'i PERIMAD
Ny zavatra tsy mampino dia ny valintenin-drainy. Raha izaho no tompon'andraikitra amin'ny Apple amin'ny fanapahana izany raha vantany vao fantatro io valiny io dia nofoanana ny fiverenana. Raha hividy ao amin'ny AppStore dia mila mahafantatra ny teny miafina ianao; Raha nomen'ity lehilahy ity an-janany izany dia avelao izy hikoty, indrindra rehefa avy mamaly toy izany.